Umphathi Wezezimali we-Euro Zone Uthi U-Apple "Akaqondi" Mayelana Nezinsolo Zokugwema Intela | Ngivela kwa-mac
Umphathi wezeziMali wase-Euro uthi i-Apple "ayiqondi" Mayelana nezinsolo zokugwema intela
UJeroen Dijsselbloem, inhloko yezezimali endaweni yase-Euro, ukhokhise u-Apple kanzima, eyisola "ngokungasiqondi isimo" esibhekene nenkampani yaseCalifornia futhi waqinisekisa ukuthi inkampani "ayiqondi ukuthi kwenzekani emphakathini wanamuhla".
Azikho izimpawu zokuthi kube nokuthula empini yokwahlukanisa phakathi kwe I-European Commission ne-Apple, kulandela le ukufunwa kwenkampani lokho kungamphoqa ukuthi akhokhe ngokubuyisa isamba sazo zonke izintela ezigwenywe isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi. Sekukonke, isamba esilingana ne- $ 15 billion, noma yini efanayo, cishe ama- € 13 billion.
Ngemuva kwamazwi ahlabayo kaTim Cook, isikhulu senkampani, echaza isinqumo sentela "njengodoti wezepolitiki", uMnu Dijsselbloem, ngokusho kwabezindaba The Wall Street Journal, limele i-EC, uphendule ngonya olufanayo:
“Impendulo ka-Apple ikhombisa ukuthi abaqondi ukuthi kwenzekani emphakathini; abaqondi ukuthi kwenzekani empikiswaneni yomphakathi. Kuyindlela ye- inkinga yokuziphatha eqinile kakhulu, futhi izinkampani ezinkulu, noma ngabe zinkulu kangako, azikwazi ukugwema lezi zinkinga bese zithi: 'akumayelana nathi, asinankinga'. «
Inkinga izoletha umsila. Akukabikho ncazelo yangempela yentela ekhokhelwe kuze kube manje yi-Apple, noma imigomo okufanele ikhokhwe ngayo imali enkulu.
Noma kungaba njani, impikiswano iyasetshenzwa: ngakolunye uhlangothi kukhona labo abeseka inkampani becabanga ukuthi akulungile ukuthi izinkampani nezizwe ezinjenge-Apple kufanele zikhokhe intela efanayo nezinye izinkampani ezinikezela ngemali encane kakhulu ekwenzeni izinto ezintsha nokukhula kwe-R & D ezweni elilodwa, nakwelinye, labo abacabanga lokho Sonke siyafana futhi kufanele sibe nezibopho ezifanayo nezimali zomphakathi.
Sizobona ukuthi lolu daba luqhubeka kanjani ngoba kubonakala ngathi alunaso isisombululo ngokushesha.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » Umphathi wezeziMali wase-Euro uthi i-Apple "ayiqondi" Mayelana nezinsolo zokugwema intela
Bayekeni nabo bonke abanye bakhokhe, inyunyana yezimali manje!
KwabaseMelika, iBillion inamazero amathathu ngaphezulu kunathi.
Akunasidingo sokuhumusha nokuguqula amadola abe ngama-euro kuphela.
Kithina, kungama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-13000, okukuwo kungama-euro ayizigidigidi eziyi-15.
Onjiniyela manje sebenganikela ngokubhaliselwe okungavuselelwa ku-App Store
Shaun Izimvu, mahhala isikhathi esilinganiselwe